▷ Hadda si toos ah u nool: Dhammaan heshiisyadii ugu dambeeyay ee Cyber ​​​​Isniinti ee Nintendo Switch - 【Comparison】 2022
Hadda noolow: dhammaan heshiisyadii ugu dambeeyay ee Cyber ​​​​Isniinta ee Nintendo Switch
Qiimeynta Dhageystayaasha: Qiimeyn sugitaan ah da'da
(Sumcada sawirka: Nintendo)
Xusuusnow markii ugu horeysay ee masiibada ku dhacday oo aadan heli karin Ring Fit Adventure jacayl ama lacag? Hagaag hadda waad awoodaa, iyo qiimo dhimis.
Ring Fit Adventure hadda waa $54 Amazon, taas oo kuu badbaadinaysa $ 25.99. Laakiin wax yar ayaa hadhay wakhtiga qorista, markaa waxa fiican inaad si degdeg ah u dhaqanto. Ma doonayo inaan ku garaaco agagaarka baadiyaha, waxaan ku aragnay qiimo dhimisyo badan oo Ring Fit Adventure agagaarka Black Friday, laakiin nasiib daro inta badan heshiisyadaas waa la iibiyay.
Laakiin Ring Fit Adventure waa mid ka mid ah dhowrka ciyaarood ee loo yaqaan 'Switch games / accessories' ee aan soo jeedin lahaa iibsashada waqtigan sanadka, in kasta oo aysan jirin wax qiimo dhimis ah. Shakhsi ahaan, waxaan qorsheynayaa inaan boodhkayga ku boodo Sannadaha Cusub ee cusub markaan raadinayo inaan fuliyo qaraarkayga si aan jimicsi dheeraad ah u sameeyo anigoo doonaya inaan ka soo kabsado dhaawac canqowga ah oo aan hadda qabo, sababtoo ah haddii aadan jimicsi sameynin markaad la dagaalanto xayawaan weyn oo masduula ah, markaa adiga samaynayaan. Runtii ma jimicsi samaysaa? Haddii aad sidoo kale wax yar u xiisaynayso inaad ku jimicsato meel fagaare ah, Ring Fit Adventure ayaa ku habboon bixinta jimicsiga farxadda leh ee raaxada gurigaaga, oo ay u dheer tahay madadaalo badan.
Si fudud waa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee Nintendo Switch ee maanta la heli karo.
Weligaa ma ku fikirtay qalab la dayactiray? Waa, inay la yimaadaan dammaanad isku mid ah iyo dhaawaca, haddii ay jiraan, waxay noqon doonaan kuwo la isku qurxiyo, waxaadna badbaadin kartaa xirmo.
Tusaale ahaan, Waxaad ku heli kartaa Nintendo Switch € 274… laakiin heshiisyada Cyber ​​​​Isniinta waxaad ka heli kartaa 20% dhimis, taasoo hoos u dhigaysa € 218. Waxayna ku jirtaa qaab wanaagsan sidoo kale, mudan in la hubiyo haddii aad rabto inaad kaydiso gariiradda ama laba.
Waxaan go'aansaday inaan weydiiyo kooxda LaComparacion si ay u arkaan midka qof walba jecel yahay Nintendo Switch game (aka ugu fiican), ka dibna waxaan hubiyay haddii uu jiro heshiis ku saabsan cinwaankaas gaarka ah hadda.
Qoraaga kombuyuutarka Jessica Weatherbed ayaa sheegtay in ciyaarta ay ugu jeceshahay uu yahay Hades, oo ah dabin harraad khuraafaad ah oo ku gurguurta godad godad ah, taas oo aan la yaab lahayn haddii aad ogtahay. Waqtigan xaadirka ah, Haadees waa qiimo jaban, laakiin gudaha UK oo kaliya, Nintendo online dukaanka. Waan ka xumahay saaxiibada Ameerika.
LaComparacion intern Jamel Smith ayaa sheegay in ciyaarta uu jecel yahay ee loo yaqaan 'Switch game' ay tahay Luigi's Mansion 3. Kuma eedayneyno isaga sababtoo ah sharci ahaan ma awoodno ilaa uu ka noqdo xubin waqti-buuxa ah oo shaqaale ah, sababtoo ah taasi waa hadda. Walmart waxay bixisaa qiimo dhimis 10 Yuuro Luigi's Mansion 3.
Tifaftiraha taleefoonka James Peckham ayaa u ciyaaray si badbaado leh isagoo ka doortay Super Mario Odyssey ee caadiga ah ee 'Switch'. Waxay ku jirtaa liiskayada ciyaaraha beddelka ee ugu fiican, waan ku siin doonaa. Waxaa dheer, Walmart waxay siinaysaa Super Mario Odyssey kaliya € 35.23 (€ 5 kayd ah) hadda..
Henry St Leger, Isbarbardhigga degen dweeb caafimaad qaba (loo yaqaan warkeena iyo tifaftiraha muuqaalada), ayaa sheegtay in Hollow Knight uu yahay ciyaarta ugu fiican ee Beddelka, marka lagu qasbay inuu doorto hal kaliya. Nasiib darro Henry uma eka inuu doonayo midkiin inuu lacag kaydsado maadaama Hollow Knight uusan iib ahayn hadda, raali ahaada.
Vic Hood, tafatiraha ciyaarta ee LaComparacion (loo yaqaan me), ayaa si cad u doortay ciyaarta ugu fiican ee loo yaqaan 'Switch game', oo xitaa hadda waa iib. Waxa ka haray Edith Finch hadda waa kaliya € 5.29 Bakhaarka Nintendo UK haddataas oo macnaheedu yahay inaad kaydisay wax ka badan € 10 oo ka baxsan kharashkaaga caadiga ah.
Nintendo Switch waxa la sii daayay afar sano ka hor intii lagu jiray wakhtigaas waxaan ku aragnay ciyaaro badan oo loo yaqaan 'Switch game console' guriga. Weli, waa mid ka mid ah ciyaaraha bilawga ah ee 'Switch' ee asalka ahaa kaas oo lagu doodi karo inuu weli yahay cinwaanka ugu caansan console-ka ilaa maantadan la joogo.
Taasi waa sax, waxaan ka hadlayaa The Legend of Zelda: Neefsiga Duurjoogta. Gelitaankeedii ugu horreeyay ee Zelda ee 'Switch' ayaa wali dad badani u arkaan inuu yahay mid ka mid ah ciyaaraha ugu fiican waqtiga oo dhan, iyada oo aan loo eegin waxa ku dhaca Switch, had iyo jeer waa wax lagu farxo in la arko BOTW iib ah.
Waqtigan xaadirka ah, Walmart waxay bixinaysaa neefta duurjoogta ah € 35taas oo macnaheedu yahay in aad ka badbaadinayso ku dhawaad ​​€ 7 RRP-gaaga caadiga ah ee € 41,99. Ma ahan qiimaha ugu hooseeya ee aan ku aragnay BOTW, ka dib markii uu hoos ugu dhacay € 29.99 sanadka 2019, laakiin wali waa qiimo qumman mid ka mid ah ciyaaraha ugu fiican abid.
Waxaan haynaa war xun: kan la yaqaan (laakiin cajiib ah) Xidhmada Nintendo Switch at Best Buy Waxay ahayd mid ka baxsan kaydka ... laakiin waxaan aragnaa in ay weli jiraan qayb ka mid ah kaydka, sidaas darteed waxaa suurtogal ah in qaar badani ay mar kale soo baxaan (oo ay jiraan kuwo badan, laakiin intooda badani waa ka baxsan yihiin).
Haddaba maxaa xirmadan ka dhigay mid aad u wanaagsan? Hagaag, waxa ay la socotaa Nintendo Switch (Neon), Mario Kart 8 Deluxe, iyo muddo saddex bilood ah Nintendo Switch xubinimo ka ah € 299.99; Aad bay qiimo ugu fiican tahay lacag sababtoo ah iibsashada dhammaan alaabtan si gaar ah waxay kuugu kici doontaa € 370 oo qiimo buuxa ah.
Haddii aad joogto UK, ha welwelin, awoodaan Had iyo jeer ka faa'iidayso dalabkan weyn ee Nintendo Switch. Xirmadan isku mid ah ayaa diyaar u ah € 259.99 ee My Nintendo Store wakhtigan xaadirka ah.